Dukaanka Apple Store qaar baa u lebista ciyaaraha Olimbikada iyagoo sharfaya ciyaartooda | Waxaan ka socdaa mac
Maalmo kooban ayaa ka dhiman inta ay bilaabanayaan Ciyaaraha Olimbikada Tokyo. Sannadkan lagu calaamadeeyay aafada, wax walba waxay isku dayayaan inay u muuqdaan xoogaa caadi ah. Tan awgeed, waxaa loogu talagalay in lagu beero ruuxda Olombikada bulshada iyadoo loo marayo dhinacyada muuqaalka. Apple waxay gacan ka geysaneysaa ololahan Dharka ilaa Apple Store. Si tan loo sameeyo, waxay isticmaashaa midabada calanka waddammada ka qayb galaya Ciyaaraha Olambikada, iyo indhaha kale.
Kahor Ciyaaraha Olambikada, Apple waxay bilowday inay qurxiso bannaanka kore ee qaar ka mid ah goobaha Dukaanka Apple iyadoo naqshad naqshadaysan ay ka dhigan tahay 22 dal oo adduunka ah. Ma cadda meelaha Apple Store ay ka muuqan doonaan qurxinta, laakiin Mac Otakara ayaa ku arkay ujeedka goobta Apple Shinjuku ee Tokyo, Japan. Daabacaadda ayaa sidoo kale sheegtay in Apple Ginza iyo Apple Omotesando la qurxin doono. Apple Aventura oo ku taal Miami, Apple Piazza Liberty oo ku taal Milan iyo Apple Garosugil oo ku taal Seoul sidoo kale waxay leeyihiin goob bakhaar la mid ah.
Naqshadeynta naqshadeynta waxaa loogu talagalay inay u dabaaldegto isla waddan uruurinta kuwa cusub Shirkadda Caalamiga ah ee 'Apple Collection Sport Loop', in shirkadda la bilaabay dabayaaqadii bishii Juun. Apple waxay tiri aruurinta waxaa loogu tala galay "in loogu dabaal dago dareenka aan la soo koobi karin iyo dareenka tartan ee dhamaan ciyaartooyda iyo taageerayaasha." Sidoo kale, Apple Store sidoo kale waxay leeyihiin shaashado Apple Watch ah oo muujinaya xargaha cusub. Furayaasha barnaamijyada lifaaqan ee lifaaqan waxay u oggolaanayaan dadka soo booqda inay kala soo baxaan wejiyada muuqaalka mawduucyada waddan kasta oo matalaya.
Kaliya waxay u baahan yihiin inay bilaabaan oo aan bilowno ku raaxeysiga iyo ku raaxeysiga isboortiga cajiibka ah ee fadhigayaga;). By habka Horey waad u ogayd sida loo daawado ciyaaraha olambikada sax? Haddii aysan wali kuu caddayn ha ilaawin inaad fiiriso galitaankan halkaas oo wax kasta oo u baahan in la qabto lagu qeexo si aan haba yaraatee wax u seegin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaammada Apple qaarkood waxay u labistaan ​​ciyaaraha Olimbikada iyagoo sharfaya cayaaraha ay ciyaaraan
Apple TV + waxay heshiis iskaashi la saxiixatay guuleystaha Oscar Adam McKay